မိမိချစ်သူကို ဖုန်းခေါ်လို့ ဖုန်းမကိုင်တဲ့အခါ မိန်းကလေးတွေ ခေါင်းထဲ အော်တိုပေါ်လာတဲ့ အတွေးများ... - MM Daily Life
မိမိချစ်သူကို ဖုန်းခေါ်လို့ ဖုန်းမကိုင်တဲ့အခါ မိန်းကလေးတွေ ခေါင်းထဲ အော်တိုပေါ်လာတဲ့ အတွေးများ…
August 31, 2021 by MM Daily Life
မိမိခဈြသူကို ဖုနျးချေါလို့ ဖုနျးမကိုငျတဲ့အခါ မိနျးကလေးတှေ ခေါငျးထဲ အျောတိုပျေါလာတဲ့ အတှေးမြား
မိနျးကလေးတှေ ဆိုတာလေ နညျးနညျးတော့ ပူပငျမှုတှေ မြားတဲ့ အမြိုးပါ ။ ဘယျသူ့ကွောငျ့မှလညျး မဟုတျဘဲ သူတို့ဟာသူတို့ကို အပူအပငျတှနေဲ့ ပွညျ့နေ တတျတာ ။အတှေးတှမြေားပွီး စိတျပူပငျ တတျလှနျးတာ ယောကျြားနဲ့ မိနျးကလေး မတူတဲ့ အခကျြပါ ။
မိနျးကလေးတှကေ အသေးစိတျတယျ ၊ကိစ်စသေးသေးလေးတှေ ကအစ အလေးထား တတျတော့ ယောကျြားလေးတှနေဲ့ ရနျတှဖွေဈ ၊ ငွိကုနျတာပါပဲ ။ခဈြသူမိနျးကလေးက ဖုနျးချေါလို့ အကွောငျးတဈခုခု ကွောငျ့ ဖုနျးမကိုငျမိတဲ့ အခါ မိနျးကလေးတှေ ခေါငျးထဲမှာ အတှးပေါငျး သောငျးခွောကျထောငျက တနျးစီပွီးတော့ကို ဝငျလာတာပါ ။
၁။သူတဈခုခုမြား ဖွဈနတောလား ? သူက ကားမောငျးတာ ဂရုမစိုကျဘူး ၊ အကျဆီးဒငျ့တှမြေား ဖွဈနတောလား ?
၂။သူ ဟုတျရောဟုတျရဲ့လား ? ငါမသိအောငျ ဘာမဟုတျ တာတှေ လုပျနေ တာလဲ မသိဘူး။
၃။သူ့ရညျးစားဟောငျးနဲ့ အတူတူမရှိပါစနေဲ့လို့ ဆုတောငျးပါတယျ ..ဟုတျနလေို့ကတော့ ဒီကောငျမလှယျဘူး။
၄။အိုး လုပျပွနျပွီ ..။ ဖုနျးမကိုငျပွနျဘူး ၊ အိုကလေေ အေးဆေးပဲ
၅။အိုး..ငါဘာတှတှေေးနတောလဲ..သူက ငါ့တဈယောကျတညျး ကိုပဲ ခဈြတာပါ
၆။ဒါပမေယျ့ ခုထိ ဘာလို့ ဖုနျးမကိုငျသေးတာလဲ… မွနျမွနျကိုငျပါတော့
၇။ အခု ငါ အရမျးလှမျးနပွေီ
၈။ ဘာကိစ်စတှမြေား ရှိနတောလဲဟယျ
၉။ဒီတဈခါတော့ လုံးဝတငျးသှားပွီ … ခှငျ့မလှတျဘူး
၁၀။သူငါ့ကို ဂရုမစိုကျဘူး ၊ အလေးမထားဘူး
၁၁။သခြောတယျ…ဒငျး..ကောငျမတဈယောကျနဲ့ အတူတူရှိနပွေီ… စိတျတှေ အရမျးတိုနပွေီနျော
၁၂။ ငါဘာလို့မဟုတျတာတှေ တှေးနတောလဲ ..သူငါ့အပျေါ မဟုတျတာ မလုပျလောကျ ပါဘူး။
၁၃။ သူတဈခုခုဖွဈနပွေီ ဘာမှမဖွဈပါစနေဲ့ ဘာမှမဖွဈပါစနေဲ့
ကဲ..အဲ့ဒါပဲကွညျ့တော့ ဖုနျးလေး မကိုငျတာနဲ့ သူတို့စိတျထဲ ဘယျလိုတှတေောငျ တှေးပူပွီး ဗွောငျးဆနျနလေဲဆိုတာဒါကွောငျ့မို့ ကောငျမလေးတှေ ဖုနျးမကိုငျလို့ ပှစိပှစိပွောတာတှကေို အပွဈမမွငျ ပါနဲ့ ။
မိနျးမတို့ရဲ့ သဘာဝအရ ပူပငျတတျတဲ့ စိတျလေးနဲ့ သူတို့ခဈြသူ အပျေါ ခဈြတဲ့ စိတျကွောငျ့ ဒီလိုတှေ ဖွဈကုနျတာပါ ။မခဈြတဲ့သူ ကိုတော့ ကောငျမလေးတှေ အဲ့လိုဖွဈမယျ မထငျဘူး ။ ဒါလေးတှကေ ခဈြတဲ့စိတျနဲ့ ကွညျ့မယျဆိုရငျ ခဈြဖို့တောငျ ကောငျးပါသေးတယျ နျော။
Credit CHAN (ရှအေငျးလေး)
မိမိချစ်သူကို ဖုန်းခေါ်လို့ ဖုန်းမကိုင်တဲ့အခါ မိန်းကလေးတွေ ခေါင်းထဲ အော်တိုပေါ်လာတဲ့ အတွေးများ
မိန်းကလေးတွေ ဆိုတာလေ နည်းနည်းတော့ ပူပင်မှုတွေ များတဲ့ အမျိုးပါ ။ ဘယ်သူ့ကြောင့်မှလည်း မဟုတ်ဘဲ သူတို့ဟာသူတို့ကို အပူအပင်တွေနဲ့ ပြည့်နေ တတ်တာ ။အတွေးတွေများပြီး စိတ်ပူပင် တတ်လွန်းတာ ယောက်ျားနဲ့ မိန်းကလေး မတူတဲ့ အချက်ပါ ။
မိန်းကလေးတွေက အသေးစိတ်တယ် ၊ကိစ္စသေးသေးလေးတွေ ကအစ အလေးထား တတ်တော့ ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ ရန်တွေဖြစ် ၊ ငြိကုန်တာပါပဲ ။ချစ်သူမိန်းကလေးက ဖုန်းခေါ်လို့ အကြောင်းတစ်ခုခု ကြောင့် ဖုန်းမကိုင်မိတဲ့ အခါ မိန်းကလေးတွေ ခေါင်းထဲမှာ အတွးပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်က တန်းစီပြီးတော့ကို ဝင်လာတာပါ ။
၁။သူတစ်ခုခုများ ဖြစ်နေတာလား ? သူက ကားမောင်းတာ ဂရုမစိုက်ဘူး ၊ အက်ဆီးဒင့်တွေများ ဖြစ်နေတာလား ?
၂။သူ ဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လား ? ငါမသိအောင် ဘာမဟုတ် တာတွေ လုပ်နေ တာလဲ မသိဘူး။
၃။သူ့ရည်းစားဟောင်းနဲ့ အတူတူမရှိပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပါတယ် ..ဟုတ်နေလို့ကတော့ ဒီကောင်မလွယ်ဘူး။
၄။အိုး လုပ်ပြန်ပြီ ..။ ဖုန်းမကိုင်ပြန်ဘူး ၊ အိုကေလေ အေးဆေးပဲ
၅။အိုး..ငါဘာတွေတွေးနေတာလဲ..သူက ငါ့တစ်ယောက်တည်း ကိုပဲ ချစ်တာပါ
၆။ဒါပေမယ့် ခုထိ ဘာလို့ ဖုန်းမကိုင်သေးတာလဲ… မြန်မြန်ကိုင်ပါတော့
၇။ အခု ငါ အရမ်းလွမ်းနေပြီ
၈။ ဘာကိစ္စတွေများ ရှိနေတာလဲဟယ်
၉။ဒီတစ်ခါတော့ လုံးဝတင်းသွားပြီ … ခွင့်မလွှတ်ဘူး
၁၀။သူငါ့ကို ဂရုမစိုက်ဘူး ၊ အလေးမထားဘူး
၁၁။သေချာတယ်…ဒင်း..ကောင်မတစ်ယောက်နဲ့ အတူတူရှိနေပြီ… စိတ်တွေ အရမ်းတိုနေပြီနော်
၁၂။ ငါဘာလို့မဟုတ်တာတွေ တွေးနေတာလဲ ..သူငါ့အပေါ် မဟုတ်တာ မလုပ်လောက် ပါဘူး။
၁၃။ သူတစ်ခုခုဖြစ်နေပြီ ဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့ ဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့
ကဲ..အဲ့ဒါပဲကြည့်တော့ ဖုန်းလေး မကိုင်တာနဲ့ သူတို့စိတ်ထဲ ဘယ်လိုတွေတောင် တွေးပူပြီး ဗြောင်းဆန်နေလဲဆိုတာဒါကြောင့်မို့ ကောင်မလေးတွေ ဖုန်းမကိုင်လို့ ပွစိပွစိပြောတာတွေကို အပြစ်မမြင် ပါနဲ့ ။
မိန်းမတို့ရဲ့ သဘာဝအရ ပူပင်တတ်တဲ့ စိတ်လေးနဲ့ သူတို့ချစ်သူ အပေါ် ချစ်တဲ့ စိတ်ကြောင့် ဒီလိုတွေ ဖြစ်ကုန်တာပါ ။မချစ်တဲ့သူ ကိုတော့ ကောင်မလေးတွေ အဲ့လိုဖြစ်မယ် မထင်ဘူး ။ ဒါလေးတွေက ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင် ချစ်ဖို့တောင် ကောင်းပါသေးတယ် နော်။
Credit CHAN (ရွှေအင်းလေး)
Categories သုတရသ Post navigation
ယောကျြား တဈယောကျကို အောငျမွငျအောငျ ပံ့ပိုးပေးနိုငျတဲ့ မိနျးမ “၁၀” မြိုး…
နောကျမီး မလငျးပါနဲ့ (နောကျမီးလငျးလို့ လှတာ ပိုးစုနျးကွူးပဲရှိတယျ)…